Tamarta gaaska dabiiciga sidoo kale waxay soo saartaa wasakheynta | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tamarta gaaska dabiiciga sidoo kale waxay soo saartaa wasakheynta
Manuel Ramirez | | Tamarta Caadiga ah
La tamarta gaaska dabiiciga ah waxaa lagu arkaa indho wanaagsan maadaama ay ku saabsan tahay shidaal badan nadiifiye marka loo eego dhuxusha oo mararka qaarkood loo isticmaalo beddelkeeda dabiiciga ah.
Laakiin sumcadan wanaagsan ma aha run sida ay u muuqato sida ay sheegayaan warbixino iyo warbixino kala duwan, taas oo lagu sharaxay sida tamarta ka timaada gaaska dabiiciga ay u soo saarto wasakh weyn marka hawsha soo saaristeeda la fulinayo. Waa si hufan markay ku gubato nidaamka gubida inay ka sii cadahay maxaa yeelay qiiqa gaaska uu ka hooseeyaa waqtigaas.
Waa inaad ka taxaddartaa sida alaabada qaarkood loo qiimeeyo, maadaama aysan ahayn kaliya qeybta ugu dambeysa ee faddarada la soo saaray aysan muuqan, laakiin ay tahay geedi socodka oo dhan. Jajabinta ama jajabinta hawo-xumada ayaa si sax ah u ah meesha ugu badan ee wasakheynta ay tahay.
Jajabinta ayaa ka kooban markii la abuurayo jajab dhagaxa ah si qayb ka mid ah gaasku ugu baxdo banaanka si hadhowna ceelasha looga soo saaro. Intaas waxaa sii dheer, dhibaatada nidaamkan ayaa ah in kiimikooyin loo isticmaalo qeybtaan wax soo saarka ka dibna loo sii daayo jawiga.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka halista ah waa inay wasakheeyaan biyaha dhulka hoostiisa laga cabo iyo waxay sababtaa qiiqa waaweyn ee CO2 iyo methane, taasoo sii xumeyneysa kuleylka adduunka iyo isbeddelka cimilada. Wasakheynta biyaha la cabo ee dhulka hoostiisa ah, waxaa dhacda in caafimaadka dadka ku dhow kaydadka ay aad uga sii xumaadaan marka laga reebo qashinka hawada gala.
1 Shidaal fosil
2 Wasakhaynta hawada iyadoo laga dhalinayo tamar gaaska dabiiciga ah
4 Sunta wasakhda biyaha
6 Saamaynta ay ku yeelan karto
7 Documentaries ku saabsan tamarta gaaska dabiiciga ah
8 Raadinta beddel tamarta gaaska dabiiciga ah
Gaaska dabiiciga waa shidaal fosil, inkasta oo qiiqa caalamiga ah ee ka imanaya gubitaankiisa iyagu ma badna dhibaatada haddii ay keento dhuxusha ama batroolka.
Gaaska dabiiciga ayaa soo baxa 50 ilaa 60 boqolkiiba ka yar CO2 markii lagu gubay warshad tamarta gaaska dabiiciga cusub marka la barbar dhigo qiiqa caadiga ah ee laga helo warshadda dhuxusha. Waxay sidoo kale yareyneysaa gaaska hawada lagu sii daayo boqolkiiba 15 ilaa 20 marka loo eego kuwa ka dhasha mishiinka baatroolka ku jira gaariga.
Halka ay haa tahay taas qiiqa ka soo baxa waxaa laga helaa soo saarista iyo qodista gaaska gaaska dabiiciga ah ee ceelasha iyo gaadiidkiisa maraya dhuumaha taasoo keenta miiraha miiraha, gaas xitaa ka awood badan CO2. Daraasadaha hordhaca ah waxay muujinayaan in qiiqa methane-ka uu gaarayo 1 ilaa 9 boqolkiiba wadarta qiiqa.
Wasakhaynta hawada iyadoo laga dhalinayo tamar gaaska dabiiciga ah
Gaaska dabiiciga ayaa tilmaamaya Gubashada nadiifiye marka loo eego shidaalka kale, maadaama ay soo saarto qadar yar oo ah baaruud, meerkuri iyo waxyaabo kale. Gubista dabiiciga way gubtaa waxay soo saartaa nitrogen oxide, inkasta oo ay ka hooseyso baatroolka iyo naaftada loo isticmaalo matoorada gawaarida.
10.000 guryo Mareykan ah oo shaqeeya Marka la isticmaalo gaaska dabiiciga halkii laga isticmaali lahaa dhuxusha, waxay ka fogaanaysaa qiiqa sanadlaha ah ee 1.900 tan oo ah nitrogen oxide, 3.900 tan oo SO2 ah iyo 5.200 tan oo jajab ah. Yaraynta qiiqaasi waxay noqoneysaa faa'iidooyinka caafimaadka bulshada, maadaama suntaasi ay xiriir la leedahay dhibaatooyin sida neefta, boronkiitada, kansarka sanbabada, iyo inbadan.
In kasta oo ay jiraan faa'iidooyinkan, haddana horumarinta gaaska aan caadiga ahayn ayaa awood u leh saameyn ku yeelato tayada hawada gudaha iyo tan gobolka. Xaddiga sare ee wasakhda hawada ayaa lagu soo arkay meelaha qaarkood oo qoditaanku ka dhaco.
U soo-gaadhista heerarka sare ee wasakhdaas way awoodaan kor u qaadista dhibaatooyinka neefsashada, dhibaatooyinka wadnaha iyo kansarka.
Jabitaanka Haydarooliga waa farsamo lagu kordhinayo soo saarista saliidda iyo gaaska dhulka hoostiisa. Laga soo bilaabo 1947, ilaa 2,5 milyan oo jabka wanaagsan ayaa ka dhacay adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan hal milyan oo ka tirsan Mareykanka.
Farsamadu waxay ka kooban tahay abuuro hal ama in ka badan kanaallo gudbiya iyada oo la marinayo cirbadeynta biyaha cadaadiska sare, si ay uga adkaato iska caabbinta dhagaxa waxayna fureysaa jabka la xakameeyo ee ceelka guntiisa, qeybta la doonayo ee hydrocarbon ee ay ku jirto sameynta.
Isticmaalka farsamadan ayaa oggolaatay waxsoosaarka saliida wuxuu kordhi doonaa 45% tan iyo 2010, taasoo ka dhigtay Mareykanka dalka labaad ee ugu wax soo saar badan adduunka.
Waxaa kale oo la xusay in saameynta deegaanka ee farsamadan, oo ay ka mid yihiin faddarada aquifers-ka, isticmaalka biyaha oo sareeya, wasakhaynta jawiga, wasakhda buuqa, guuritaanka gaasaska iyo kiimikooyinka loo isticmaalo dusha sare, wasakhaynta dusha sare ee daadashada awgeed, iyo waxyeelada caafimaad ee ka dhalan karta
Mid kale oo ka mid ah kiisaska ugu halista badan ee khalkhalgelinta waa kororka dhaqdhaqaaqa dhulgariirka, inta badan lala xiriiriyaa cirbadeynta dareeraha qoto dheer
Sunta wasakhda biyaha
Iyada oo jabinta Haydarooliga ee ceelka ayaa sababay daadashada gaaska, qalabka shucaaca iyo methane ee biyaha la cabbo.
Waxaa jira kiisas la diiwaangeliyey oo ku saabsan aquifers-ka agagaarka ceelasha gaaska oo ay ku sumoobeen dareerayaasha jajaban iyo sidoo kale gaasaska, oo ay ku jiraan methane iyo xeryahooda dabiiciga ah ee kacsan. Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee wasakheynta wasakhdu waa dhisme si liidata loo sameeyay ama ceelal dillaaca oo u oggolaanaya in gaasku ku daato aagga biyaha.
Dareerayaasha loo isticmaalo jabinta Haydarooliga sidoo kale waxay gaareen ceelal laga tegey, iyo sidoo kale qaar si aan habooneyn loo shaabadeeyey, taas oo aakhirka keenta in biyo-mareenadan ay sumoobaan.
Fracking ayaa lala xiriiriyay waxqabadka dhul gariirka oo hooseeya, laakiin dhacdooyinka noocan oo kale ah badanaa lagama ogaan karo dusha sare.
In kasta oo isticmaalka biyaha wasakhda ah marka la isku durayo cadaadis sarreeya ceelasha irbadda ee fasalka II leedahay lala xiriiriyay dhulgariirro baaxad weyn leh gudaha Mareykanka. Ugu yaraan kalabar dhulgariirrada culeyska 4.5 ama ka weyn ayaa ku dhuftay gudaha Mareykanka XNUMX-kii sano ee la soo dhaafay waxay ka dhaceen gobollada ay ka dhacdo burburka.
Daraasad cusub oo la daabacay sanadkii 2016 isla markaana ay sameeyeen koox khubaro ku takhasustay cilmiga dhulka iyo seismologists oo ka socda jaamacada Texas Methodist University of South iyo Sahanka cilmiga dhulka ee Mareykanka, ayaa muujisay in cirbadeynta tiro badan oo ah biyaha wasakhda ah oo ay weheliso soo saarida brine ee dhulka hoose ee ceelasha Gaaska oo yaraaday wuxuu ahaa sababta ugu badan ee sababtay 27 dhulgariir oo ay dareemeen dadka Azle, Texas, intii udhaxaysay Diseembar 2013 iyo gu'gii 2014, halkaas oo aysan waligood lala xiriirin dhulgariir.
Saamaynta ay ku yeelan karto
Marka laga reebo kororka dhulgariirka, iskudhisyada kiimikada ee farsamadan loo adeegsaday way awoodaan wasakhda dhulka iyo biyaha dhulka hoostiisa, sida laga soo xigtay British Royal Society sanadkii 2012.
Waxa kale oo aad ka heli kartaa saddex waraaqood oo cilmiyaysan oo la daabacay 2013 oo ku beegan tilmaanta taas wasakheynta biyaha dhulka hoostiisa ka soo go'i suuragal ma ahan jir ahaan. Waxa cad ayaa ah in si aysan u dhicin, dhaqanka ugu fiican ee hawl socodsiinta ay tahay in marwalba ay dhacdo. Way dhacdaa in tani markasta aysan ahayn kiiska, sidaa darteed waxaa jira dhibaato weyn oo wasakheynta dhulka hoostiisa ah.
Documentaries ku saabsan tamarta gaaska dabiiciga ah
Waxaa jira dhowr dokumenti dokumenti ah oo laga heli karo mucaarad cad u jajabinta sida Josh Fox ee Gasland. Tan waxay ku soo bandhigtay dhibaatooyinka wasakheynta aquifers u dhow ceelasha soo saarista meelaha sida Pennsylvania, Wyoming iyo Colorado.
Waxyaabaha qosolka leh ee ahaa in lobby warshadaha saliida iyo gaaska in ayaa su’aalo laga weydiiyay kuwii lagu soo ururiyay filimka Fox si markaa shabakadda Gasland u beeniso sheegashooyinka ay sameeyeen kooxda u ololeeyayaasha.
Filim kale oo xiise leh waa Dhulkii Ballanqaadka., oo uu soo bandhigay Matt Damon oo ku saabsan mawduuca jabka hareeraha. Sidoo kale 2013, Gasland 2 ayaa la soo bandhigay, qaybta labaad ee dokumenteriga ah ee uu ku xaqiijinayo sawirkiisa warshadaha gaaska dabiiciga ah, taas oo u soo bandhigaysa inay tahay bedel nadiif ah oo ammaan ah oo saliidda ah, runti waa sheeko xariir. Qulqulka muddada-dheer iyo wasakhaynta hawada iyo biyaha ayaa ugu dambayntii waxyeelleeya bulshooyinka maxalliga ah waxayna cimilada geliyaan khatar sababo la xiriira qiiqa methane, oo ah gaas aad u xoog badan oo lagu koriyo.
Raadinta beddel tamarta gaaska dabiiciga ah
Iyadoo intaas oo dhan la sheegay, ayaa gaaska dabiiciga ah maahan mid nadiif ah Sidii la isku dayay in loo muujiyo, laakiin hawsheeda waxay ku sii deysaa sunta wasakhda ah jawiga, sida ay u dhacdo marka farsamada jajabinta la isticmaalo.
Taasi waa sababta ay ugu habboon tahay in la ogaado xaqiiqda ku xeeran tamarta gaaska dabiiciga ah iyo aad ugu sii riix si aad u riixdid ilaha kale ee tamarta kuwaas oo gebi ahaanba nadiif ah oo waari kara waqti ka dib sida dabaysha ama qoraxda, taas oo ah meesha ay tahay inaan tagno si aan u ilaalino meerahan nabdoon iyo dhawaq.
Dhamaan shidaalkaas oo ku saleysan fosillada waxay si hubaal ah noogu hogaamineysaa Shirkaas Cimilada ee Paris taas oo daraasiin waddan ah ay ahayd inay u weecdaan go'aannada qaarkood si ay u dhigaan sannadka dambe midka ay tahay in tamarta la cusboonaysiin karo ay ahaato ujeeddada ugu weyn.
Ma rabtaa inaad ogaato waxa kuleyliyaha gaaska dabiiciga ay yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan? Ha moogaanin qodobkan:
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Tamarta gaaska dabiiciga sidoo kale waxay soo saartaa wasakheynta
Adriana Waan ka helay maqaalkaaga waxaanan rabaa inaan u isticmaalo qoraalkayga, ma ii gudbin kartaa xogtaada si aan si sax ah kuugu tixraaco iyo taariikhda aad daabacday maqaalkan. Mahadsanid
Ku jawaab Diana Alvarez
Macaamiisha cusub ee loo yaqaan 'Fracking in Chiapas', basaska ku shaqeeya gaaska dabiiciga ah, iyo in yar ayaa og dhibaatada deegaanka ay u geysaneyso dalka, in kasta oo ay "ECO" ku wadato magaceeda. Jejebinta Haydarooliga waxay baabi’isaa dabeecadda dalkeenna
Ku jawaab Vicardiag
Dhibaatada ugu weyn ee haysata kooxaha deegaanka ee dalkan ayaa ah la'aanta tababar farsamo iyo maqnaansho maskaxeed oo doodooda ah. Waa muhiim ka hor inta aan la wajihin farsamo ama ka faa'iideysiga kheyraad, in si fiican loo ogaado, haddii aysan ahayn sidii aan horay u soo sheegay, doodaha waxaa ka maqan qaddarin maskaxeed iyo sidaas darteed wax kasta oo ansax ah.
Dooddu gabi ahaanba waa lama huraan, bulshada waa inay ka digtoonaadaan horumarka hadda socdaana uusan wax u dhimi karin horumarka jiilalka soo socda, laakiin jahliga iyo baqdintu ma joojin karaan horumarka hadda socda.
Gaaska dabiiciga marka la gubo wuxuu soo saaraa 1/5 qiiqa CO2 ee kuwa ay soo saaraan dhuxusha gubta, dabcan ma ahan nadiif 100% laakiin waa ikhtiyaar aad ufiican.
Waa been in jabinta Haydarooliga ay lagama maarmaan u tahay soo saarista gaaska dabiiciga ah, waxay ku dhici kartaa qaab caadi ah hadii kaydku u ogolaado, tanina waa la sameeyay ilaa hada.
Ugu dambeyntiina, qiiqa methane ee aan la xakameynin inta lagu jiro soo-saarka gaaska dabiiciga ah ayaa la isku dayaa in la yareeyo inta ugu badan ee suurtogalka ah, tani waa mid si fudud loo fahmi karo, marka shirkadda wax soo saartaa ay lacag aad u badan ku bixiso waxsoosaarka si wanaagsan, waxa ugu dambeeya ee ay rabto waa shayga cilmi baaristaada ayaa kaa baxsan doonta. Hase yeeshe, mararka qaarkood waa lama huraan, laakiin si loo yareeyo tan dhirta wax soo saarka waxaa jira shucacyo gubaya methane ka baxsanaya (aad waxyeello u leh oo leh aqalka dhirta lagu koriyo oo 8 jeer ka sarreeya CO2) oo loo galiyo CO2, oo leh saameyn aad u hooseysa oo lagu koriyo ah.
Cimilada sii kululaaneysa waa dhibaato aad u daran oo lagu xisaabtamo, qiiqa hawada lagu sii daayo ee hawada ku jira waa in la yareeyaa sida ugu macquulsan. Shakhsiyan, waxaan aaminsanahay u guuritaanka bulsho leh heerar kaarboon kaarboon hoose iyo ka hooseysa ilaa laga gaarayo 0. Laakiin taasi muddada gaaban waa mid dhib badan oo waxaa muhiim ah in dood adag laga yeesho lana tixgeliyo moodooyinka ugu xiisaha badan.
Ku jawaab ssslabb
Manuel Ramirez aan kuu sheego in maqaalkaagu uu yahay mid aad ufiican, waxaan u maleynayay in gaaska "dabiiciga ah" uusan runtii wasakheyn laakiin waxaan hada arkaa gebi ahaanba ka duwan, waa xanuun badan sida biyaha loogu sadqeeyo, tan.
Waad ku saxantahay tamarta dabaysha, laakiin tani sidoo kale waxay leedahay qasaarooyinkeeda sababtoo ah markay helaan waqti dheer oo jiilaal ah tamartani way dhamaanaysaa, hada waxaan jeclaan lahaa inaan ku waydiiyo xulashooyinka kale ee aan wasakhda ahayn ee aan isticmaali karno?
Ku jawaab carlos fabian
Waad ku mahadsantahay faalladaada Carlos!
maria moorigo dijo
daryeelka deegaanka waa daryeelida nafteena
Jawaab maria morinigo
La-tashiga Talo-siinta dijo
Mawduuc aad u fiican iyo qodob wanaagsan ... wax kasta oo fosil ah weligood cagaar noqon maayaan
Ku soo jawaab la-tashiyada Tayada Consultoria
Waa run waa gaas dabiici ah laakiin dhib maleh (taasi waa waxa ay dadku u maleynayaan). Laakiin waa shidaal fosil ah oo macnaheedu yahay inuu yaraaday oo wasakhaysan
Daabacaadda maqaalka waa mid aad u wanaagsan. Waxaan iska diiwaan galiyaa kuwa yar ee xiisaynaya «ka soo jeeda qabiilka jinsiyada», kuna saabsan saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo iyo kuleylka adduunka ee ina wada saameeya aakhirkana way na dili doontaa inaanan ka hor istaagin raadinta walwalka leh ee hodanka ah ee aan cidina qaadan doonin qabriga laakiin in uu ka tagi doono soo laabasho, wada shaqeyntiisa ayaa ku sumeysa meeraha. Tani waxay ii horseeday inaan si dhakhso leh ugu dhiirrigeliyo mashruuc koronto muhiim u ah Dominican Republic, laga soo bilaabo hoos u dhaca bilaashka ah ee biyaha badda Kariibiyaanka ee cuf isjiidadka marxaladda ugu horreysa iyada oo loo marayo marinnada hoose ee leh marawaxadaha ka hortagga-daxalka hooseeya, iyo marxaladda labaad isla qaddarka biyaha ee marinka loo maro qolka mashiinka osmosis-ka weyn, oo lagu xareeyo keyd weyn ayaa soo saari doonta marxaladda labaad. Biyaha ka soo baxa durba 44 mitir ka hooseeya heerka badda (dooxada La Bahía de Neiba) ayaa la warshadeyn doonaa loona isticmaali doonaa isticmaalka iyo agro-warshadaha iyo sidoo kale chlorides iyo badeecooyin kale oo ay soo saari doonaan koronto sida dahabka molekulka, iwm .
Jawaab Danilo Martinez Olivo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado labada gaas midkood, propane iyo dabiici, soo saaraya kaarboon monoksaydh badan markii la gubo?
Waxaan ku weydiisanayaa maxaa yeelay marwalba waxaan isticmaali jiray gaaska propane-ka ee dhalada ku jira dhawaana waxaan u wareegay gaaska dabiiciga ee guriga.
Tan iyo markii aan u wareegay gaaska dabiiciga ah, waxaan arkay ur gubanaya oo dawakh iga dhigaysa, taas oo aan igu dhicin markii aan isticmaalayay propane. Waxaan sii fahmay in monoxide-ka c. waa ur la'aan ... qof ma i caawin karaa?
Jawaab Alejandro ocampo
Subax wanaagsan, ma i siin kartaa macluumaadkaaga si aan kuugu gudbiyo qayb ka mid ah cilmi-baaristeyda. Mahadsanid
jooji sigaar cabista laser malaga dijo
Blog xiiso leh. Waxbaan ka barto degel kasta maalin kasta. Had iyo jeer waa wax lagu farxo in la akhriyi karo qorayaasha kale waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka adeegsado qoraalkaaga ku jira degelkeyga, dabiici ahaan waxaan ka tagayaa xiriiriye, haddii aad ii oggolaato. Waad ku mahadsantahay wadaagista.
Kajawaabida joojinta sigaarka sigaarka ee laser malaga
Habeen wanaagsan waxaan sameynayaa baaritaan ku saabsan faddaraynta gaaska dabiiciga iyo maqaalkaaga oo aan jeclaaday, ma isiin kartaa xogta tixraaca baaritaankayaga.
Jawaab Luis Antonio Riaño
ok dick waxba iima tarin aniga: v
Ku jawaab zaid
MARITZA MOORALES dijo
Manuel Ramírez, waxaan ka helay maqaalkaaga "tamarta gaaska dabiiciga sidoo kale waxay soo saartaa wasakheynta" waana jeclaaday waxaana rabaa inaan u isticmaalo qoraalkayga, ma ii gudbin kartaa xogtaada si aan si sax ah kuugu tixraaco iyo taariikhda aad daabacday maqaalkan. Mahadsanid
Ku jawaab MARITZA MORALES
TS ma hakineyso xaraashka xiga ee dib loo cusbooneysiin karo